एमबिबिएस चिट चोरीमा संलग्न १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
कात्तिक २९, २०७४ बुधवार १९:५५:४० प्रकाशित
काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा चिट चोरीमा संलग्न १७ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो।
परिसरका अनुसार उनीहरुविरुद्ध तीन वटा मुद्दा दायर भएको छ । संगठित अपराध, ठगी र साइबर क्राइम मुद्दा दायर गरिएको परिसरका प्रवक्ता एसपी रामदत्त जोशीले बताए । प्रहरीले पक्राउ परेका १५ जना दुई जनालाई फरार अभियुक्त बनाएर मुद्दा चलाएको थियो।
गिरोहका नाइके समिर झासहित शैलेन्द्रकुमार झा, देवेश झा, नवराज निरौला, आशुतोष झा, हिरेन्द्र शर्मा, मुकेश राय, डा. सुशील मण्डल, अभय मिश्र, विशदेव र सौभरकुमार विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरु गत २८ असोजमै पक्राउ परेका थिए । संगठित अपराध मुद्दामा ६० दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार प्रहरीलाई भएपनि अदादतले म्याद थप नगरेपछि छिट्टै्र मुद्दा बुझाएको हो ।
त्यस्तै दुई साताअघि पक्राउ परेका डा.सुशील मण्डल र अभय मिश्रलाई पनि मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै चिट चोर्ने बिद्यार्थीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । दुई साताअघि पक्राउ परेका डा. मण्डल डिभाइसमार्फत प्रवेश परीक्षाको उत्तर तयार पार्ने व्यक्ति हुन् । आइओएमबाटै उनले एमबिबिएस अध्ययन गरेका हुन् । कुनै अस्पतालमा पनि काम नगर्ने उनले एमबिबिएसको परीक्षामा चलखेल गर्दै आएका थिए।
त्यस्तै, मिश्र पुतलीसडकस्थित एडुमार्क कन्सलटेन्सीका सञ्चालक हुन् । उनी प्रवेशपत्रमा फोटो परिवर्तन गराउने व्यक्ति हुन् । किर्ते मुद्दामा कारबाही गरेपछि उनलाई डिभाइसमार्फत समेत चिट चोरी मुद्दामा प्रहरीले कारबाही गरेको हो ।
चिट चोर्ने विद्यार्थीलाई प्रहरीले पीडित बनाएर छाडेको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनपछि विद्यार्थीहरू राहुल झा, शिखा झा, महेन्द्र ठाकुरलाई पनि मुद्दा दायर गरेको छ । पक्राउ परेर छुटेका विद्यार्थी सक्षमराज भण्डारीलाई फरार अभियुक्तका रुपमा मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानमा धेरै बिद्यार्थीहरुले डिभाइसमार्फत चिट चोरेको पुष्टि भएको थियो । प्रहरीले त्यससम्बन्धि प्रतिवेदन आईओएममा बुझाएपनि आईओएममले अहिलेसम्म नजिता प्रकाशन गर्ने वा परिक्षा रद्द गर्नेबारे निर्णय गरेको छैन ।